Homelọ Google kwupụtara dị ka gadget ka ọ bụrụ isi ihe dị na ụlọ gị | Akụkọ akụrụngwa
Ekwuputara ụlọ Google na I / O yana kemgbe mmemme ahụ anyị amachaghị banyere nkọwa na ọrụ nke ngwaọrụ a. Na mmemme Google na awa ole na ole gara aga, Google nwere bipụtara nkọwa niile, gụnyere ọnụahịa, ụbọchị mmalite na akụkụ nke arụmọrụ ya.
Ngwaọrụ a nke na-abata ime ụlọ gị, na-arụ ọrụ na Google Assistant, ahụla na ngwa ozi izipu ozi Allo ọhụrụ na na aghọwo etiti axis maka gam akporo; agbakwunye na Google Pixel kwalitere ụnyaahụ. Ngwaọrụ nwere ụfọdụ ọrụ ọfụma.
Iji Google Home ị nwere ike jikwaa Chromecast, jụọ ajụjụ, kpọọ egwu, zipu ozi na kọntaktị ma ọ bụ mepụta mmemme kalenda n'etiti ọtụtụ omume ndị ọzọ. O nwekwara nkwado maka SmartThings, akwu IFTTT, na njikwa ọtụtụ ngwaọrụ.
N’elu Ulo bu ndi Ọkụ na-enwu gosipụta agba nke Enyemaka. O nwekwara njikwa mmetụ aka ịgbanwe olu, egwu ma ọ bụ mee ka ụda olu rụọ ọrụ. Ọ nwere nhọrọ maka nhazi na isi ka anyị wee nwee ike ịgụnye ya n'ime ime ụlọ ahụ.
Maka gịnị bụ egwu, Spotify, Pandora, TuneIn, Google Play Music na YouTube Music dị, yana nhọrọ nke Chromecast Audio na nkwado ọtụtụ ụlọ. Ejiri ndokwa nke Google Search kachasị maka onye ọrụ, dị ka ịgụ akụkọ ma ọ bụ pọdkastị.
Enwere ike idobe Homelọ Google site na $ 129 na United States ụlọ ahịa na ga-abata na November 4 na anụ ụlọ na mba ahụ. Maka ndị ọzọ, anyị ga-echere ka e bido ya dịka o mere na ngwaahịa ndị ọzọ.
Ngwaọrụ nke na-elekwasị anya na Ofntanetị nke Ihe na nke ahụ ga - enyere gị aka ijikwa ọkụ ọkụ, okpomọkụ na nchekwa, ewezuga nhọrọ niile maka ntụrụndụ na imepụta ihe, ha niile na mkparịta ụka ebumpụta ụwa na Google Assistant.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Homelọ Google bu n’obi imeri ime ụlọ gị
Animas OneTouch Ping insulin pump, ebumnuche ọhụrụ maka ndị na-egwu egwu